Qeybta:Ogaysiiska7 min akhris
Luulyo 22, 2019
Sanduuqa Lacagta ee 'McKnight Endowment for Neuroscience' (MEFN) ayaa ku dhawaaqday saddexda hele ee $ 600,000 ee deeqda la siinayo iyada oo loo marayo Abaalmarinta Teknolojiyadda MEFN ee 2019, iyada oo loo aqoonsan yahay mashaariicdani awooddooda aasaasiga ah ee ay ugu beddeleyso habka cilmi-baarista maskaxda. Mid kasta oo ka mid ah mashaariicda ayaa heli doona lacag dhan $ 200,000 labada sano ee soo socota, taasoo horumarinaysa horumarinta tikniyoolajiyaddan aasaasiga ah ee loo adeegsado khariidaynta, la socoshada iyo qaabaynta shaqada maskaxda. Arinta sanadka 2019 waa:
Gilad Evrony, MD, Ph.D. ee Jaamacadda New York Caafimaadka Langone, kaas oo horumarinaya tikniyoolajiyadda unugyada unugyada aasaasiga ah si ay khariidad u yeeshaan isbadalka hidda-socodka ee dabiiciga ah ee kudhaca tiro aad u badan unugyada maskaxda bini aadamka si loo raad raaco xariiqyadooda loona abuuro nooc “geedka qoyska” noocyada unugyada maskaxda ee kala duwan.
Iaroslav 'Alex' Savtchouk, Ph.D., oo ka tirsan Jaamacadda Marquette, Mashruucan ayaa ku lug leh qaab lagu muujiyo waxqabadka maskaxda saddex cabbir ee xalka aad u sarreeya isla markaana aad uga dhakhso badan sidii hore, oo u oggolaanaya muuqaal dhameystiran oo ku saabsan waxa ka dhacaya maskaxda maskaxda ee ka jawaabaya dhiirrigelinta.
Nanthia Suthana, Ph.D., oo ka tirsan Jaamacadda California, Los Angeles, oo kooxdoodu ay horumarineyso borotokool si ay ula xiriiraan aaladaha qaarkood ee lagu dhex galiyay maskaxda maskaxeed sida qeyb ka ah daaweynta caafimaadka iyo in la qabto xogta dhaqdhaqaaqa maskaxda ee qoto dheer oo ka timid bina aadamka lagu dhex dhejiyay xaqiiqada dalxiiska iyo bey'ada dhabta ah.
(Baro wax badan oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah mashaariicda cilmi-baaristan ee hoose.
Ku saabsan Abaalmarinta Teknolojiyada
Tan iyo markii abaalmarinta Teknolojiyada la aasaasay 1999, MEFN waxay ku deeqday wax kabadan $ 13.5 milyan tikniyoolajiyad casri ah oo loogu talagalay neerfayaasha iyada oo loo marayo habka abaalmarinta. MEFN waxay si gaar ah u daneyneysaa shaqo qaadata qaabab cusub oo wajiyo cusub u ah sare u qaadista awoodda lagu habeeyo laguna falanqeeyo shaqada maskaxda. Teknolojiyada lagu sameeyay taageerada McKnight waa in ugu dambeyntii loo diyaariyaa saynisyahano kale.
"Markale, waxay ii ahayd farxad inaan arko xariifnimada shaqada ee sameynta farsamada cusub," ayuu yiri Markus Meister, Ph.D., gudoomiyaha guddiga abaalmarinta iyo Anne P. iyo Benjamin F. Biaggini oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga bayoolajiga ee Caltech . "Sannadkan, waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay in aan kafiilanno dhowr horumar oo looga golleeyahay maskaxda aadanaha, iyadoo la adeegsanayo hab lagu raadiyo safka unugyada dareemayaasha ee shakhsiga ah aalad loo adeegsado akhrinta iyo qorista calaamadaha neerfaha ee bukaanka si xor ah u socda."
Guddiga xulashada sanadkaan sidoo kale waxaa ka mid ah Adrienne Fairhall, Timothy Holy, Loren Looger, Mala Murthy, Alice Ting, iyo Hongkui Zeng, kuwaas oo sanadkaan ka doortay Abaalmarinada Teknolojiyadda McKnight ee Abaalmarinta Neuroscience Abaalmarino heer sare ah oo ah 90 codsadeyaal.
Waraaqaha ujeedka loogu talagalay abaalmarinta sanadka 2020-ka ee tikniyoolajiyada ayaa lagu wadaa in Isniinta, Diseembar 2, 2019. Ogeysiiska ku saabsan geedi socodka 2020 ayaa dhici doona Sebtember. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan abaalmarinta, fadlan booqo www.mcknight.org/programs/the-mcknight-endowment-fund-for-neuroscience/technology-awards
Soosaaraha Teknolojiyada ee 2019 McKnight ee Abaalmarinta Neuroscience
"BILAASH: Teknolojiyad hal-unug oo noocyo badan leh oo loogu talo galay Xallinta Khilaafaadka Sare ee Raadinta Maskaxda Aadanaha"
Waa aqoon guud oo ah in bini-aadam kasta uu ku bilowdo hal unug oo leh hal hal DNA oo ah "tilmaamo", laakiin faahfaahinta sida hal unug ay u noqonayso kumanaan kun - oo ay ku jiraan tobanaan balaayiin unug oo maskaxda ah - ayaan wali si weyn loo aqoon. Daraasaadka Dr. Evrony waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo tikniyoolajiyad la yiraahdo TAPESTRY, oo laga yaabo in uu iftiimiyo howshan iyada oo la dhisayo "geedka qoyska" ee unugyada maskaxda, taas oo muujineysa unugyada progenitor-ka ee keena boqolaalka nooc ee unugyada qaangaarka ee maskaxda aadanaha.
Nanthia Suthana, Ph.D., ku takhasusay cilmu-nafsiga, waaxda cilmu-nafsiga iyo cilmiga biobehavioral, Jaamacadda California, Los Angeles
Dr. Suthana wuxuu lashaqeynayaa koox isku dhafan si ay nidaamka u shaqeeyaan; kooxda waxaa ku jira injineerro koronto, jimicsi, iyo saynisyahano kombuyuutareed. Xaqiiqooyinka aasaasiga ah sida latency signalka waxay u baahan yihiin in la dejiyo si xogta loo wada shaqeyn karo loona cabiro si sax ah. Ugu dambeyntiina, waxay rumeysan tahay in bini-aadamka u dhaqma si madax-bannaan ula falgalaan jilitaanka ugu macquulsan ee suuragalka ah ay u oggolaan doonaan cilmi-baarayaashu inay si aad ah u fahmaan sida maskaxdu u shaqeyso. Marka lagu daro su'aalaha aasaasiga ah ee dareemayaasha - sida waxa dhaqdhaqaaqa maskaxda iyo jawaabaha jirka ay la socdaan ficillo gaar ah ama ficilcelinta kicinta - nidaamku wuxuu muujinayaa ballanqaad cilmi-baaris oo ku saabsan jahwareerka walbahaarka iyo xaalado kale oo ah waxyaabaha kicinta bey'adda loogu sawirayo jawi dalxiis oo la xakameynayo.